Hambalyo iyo bogaadin – All Bajuni
Golaha Wadatashiga Beelaha Bajun e London , waxay hambalyo iyo bogaadin u diraayaan Madaxweyne Md. Aadan Madobe , Madaxweyne k/xigeenka , golaha wasiiradda iyo wasiir kuxigennada ,xildhibannada barlamaanka , iyo dhamman shacbiga JUBALAND guusha ay ka gaareen dibudhisidda golaha cusub e wasiiradda .
JUBALAND weligeed wey jirtay horeyna wey u socota . Waxay qadday tillabo ku dayasho leh o ku dhisan sinnan iyo caddalad. Golaha Wadatashiga Beelaha Bajun e UK waxaay taagersan yihiin nidaamka xulidda iyo habka lo dhisay Golaha Dawladda. JUBALAND HANNOLAATO , JUBALAND HA HORUMARTO .
Golaha Wadatashiga Beelaha Bajun e UK.